Dhaqaalaha Going Viral | Martech Zone
Dhaqaalaha Going Viral
Khamiis, Juun 27, 2013 Khamiis, Juun 27, 2013 Douglas Karr
Ma ihi taageere shirkado oo dhan u biimeeya isku daygooda inay qaadaan fayras… badankood ma soo dejin karo qaaciddada oo khatar badan ayey geli kartaa. Taas macnaheedu maaha inaadan ka faa'iideysan karin kobaca weyn ee fiidiyowyada fayraska, in kastoo. Mid ka mid ah tirakoobka 'HUGE' ee sawir-gacmeedkan oo ka socda Masters in Marketing, Dhaqaalaha Going Viral, ayaa taagan… the advertising.
Tixgelinta iibsiga / ujeedadu waxay kordheysaa 14.3% iyadoo la eegayo sedexaad ee xayeysiinta bogga martigelinta fiidiyowga sare.
Taasi waa tirakoob qurux badan oo soo jiidasho leh waana mid ay ka faa'iideysanayaan dad badan oo suuq geynaya. Youtube waxay bixisaa 4 nooc oo kala duwan oo ah xayeysiinta TrueView:
Xayeysiiska gudaha ah u ciyaaro sida xayeysiis u eg TV-ga ka hor ama inta lagu jiro fiidiyow kale oo ka socda lammaanaha Youtube. Daawadayaashu waxay arkayaan 5 ilbidhiqsi oo fiidiyowga ah ka dibna way sii wadi karaan daawashada ama ka boodi karaan.
Xayeysiiska gudaha muuji ka hor Youtube fiidiyowyada lammaanaha ee 10 daqiiqo ama ka badan ah. Daawadayaashu waxay doortaan inay daawadaan mid ka mid ah seddex xayeysiis ama ay u arkaan nasashooyin ganacsi oo joogto ah inta lagu jiro fiidiyowgooda.
Xayeysiisyada raadinta ah ka muuqdo kor ama dhinaca midig ee natiijada caadiga ah bogga natiijooyinka raadinta.
Xayeysiisyada la soo bandhigayo ka soo muuqdo fiidiyowyada kale ee Youtube, ama websaydhka ku yaal Shabakadda Muuqaalka Google ee u dhiganta dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato.
Waxa ugu fiican oo dhan, adoo xayeysiinaya Youtube waxaad ku bixineysaa oo keliya marka daawade uu doorto inuu daawado fiidiyahaaga.
Tags: Fiidiyowyada Suuqgeyntaustreamviralfiidiyaha viral
Daraasadaha Macaamiisha Google ee Cilmi-baarista Suuqa iyo Qanacsanaanta Websaydhka
Raadinta Waxyaabaha Darajada Darajo Darajo Isku Xidhan 2013